Ungayifunda kanjani futhi uyiqonde imephu yesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukubona isimo sezulu yinto esiyenza nsuku zonke. Kodwa-ke, kungenzeka singaqondi kahle lapho usokhaya ekhomba ebalazweni. Sibona imephu yaseSpain enemigqa eminingi, izimpawu nezinombolo. Zisho ukuthini zonke lezo zimpawu?
Lapha ungafunda konke odinga ukukwazi funda ibalazwe lesimo sezulu futhi uyiqonde ngokuphelele. Kufanele uqhubeke ufunde futhi ubuze uma unemibuzo 🙂
1 Izimiso eziyisisekelo zebalazwe lesimo sezulu
2 Ukubaluleka kwengcindezi yasemkhathini
3 Izimpawu ebalazweni lesimo sezulu
3.1 Ukuhunyushwa kohlelo lwengcindezi ephansi futhi ephezulu
4 Izinhlobo zangaphambili
Izimiso eziyisisekelo zebalazwe lesimo sezulu
Amamephu wesimo sezulu asinikeza ukumelwa okwenziwe lula kwesimo sezulu samanje noma sesimo sezulu endaweni. Okuvame kakhulu ukuhlaziya ingaphezulu, ngoba kulapho isimo sezulu sisithinta khona. Imiqondo ejwayelekile yemeteorology iqondakala kalula. Abantu abaningi badinga ulwazi ngaye.njengemvula, imimoya, uma kunezivunguvungu, isichotho, iqhwa, Njll
Lezi zici zibaluleke impela uma kukhulunywa ngesikhathi sokuqonda. Kuthatha ini ukuze line, kungani kwenzeka, futhi kuzoqina kangakanani. Ukuqonda ukusebenza kokuguquguquka okuningi kwesimo sezulu kubaluleke kakhulu ukwazi ingcindezi yasemkhathini. Ukucindezela kwesibhakabhaka, ezimweni eziningi, kunquma isimo sezulu. Ezindaweni lapho ingcindezi yasemkhathini ingaphezulu, isimo sezulu esihle futhi esomile sikhona. Ngokuphambene nalokho, uma siphansi, kuzoba nomoya omanzi kakhulu nesimo sezulu esibi.
Ukubaluleka kwengcindezi yasemkhathini
Lapho kunohlelo lokucindezela oluphakeme kungukuthi isisindo somoya ojiyile. Lokhu kungenxa yokuthi umoya upholile futhi womile kunomoya ozungezile. Uma lokhu kwenzeka, umoya osindayo uwela ohlelweni lokucindezela. Ngalesi sikhathi, kulapho unesimo sezulu esihle futhi esinamafu ambalwa.
Ngakolunye uhlangothi, lapho sinesistimu yengcindezi ephansi, kusho ukuthi ubukhulu bomoya bukhulu kakhulu. Lokhu kungenxa yokuthi umoya uswakeme kakhulu noma uyashisa. Ngakho-ke, umoya ozungezile ungena ngaphakathi, uye enkabeni yohlelo, ngenkathi umoya okhanyayo ukhuphukela phezulu. Lapho ukukhanya, umoya ofudumele uphakama futhi uhlangabezana nezendlalelo ezipholile, uhlangana ube ngamafu. Njengoba amafu ekhula amile, amafu emvula adumile akha.
Kuzinhlelo lapho ingcindezi iphansi kakhulu kwakhiwa iziphepho. Lawa mafu azokwakha futhi ahambele esibhakabhakeni. Ukuze lamafu akheke, umoya oshisayo, onomswakama kufanele ukhuphuke ngokwanele ukuze ukhiqize ukukhula okuqondile.
Uma ubona imephu yesimo sezulu zama ukuhlaziya ukuthi bayilinganisa kanjani ingcindezi. Imayelana nokukala lokho okusindwa umoya phansi. Iyunithi yokukala yi-millibar. Lokhu kubalulekile ukwazi ngoba amaphethini amaningi wesimo sezulu ahlotshaniswa nengcindezi yasemkhathini. Inani eliphansi lengcindezi olwandle ngu-1013 mb. Lapho sinohlelo lokucindezela okuphezulu, kuvame ukufinyelela amanani we-1030 mb. Kodwa-ke, lapho uhlelo lunengcindezi ephansi, amanani angahle aye cishe ku-1000 mb noma ngaphansi kwalokho.
Izimpawu ebalazweni lesimo sezulu
Ukuze ufunde izimpawu ezibaluleke kakhulu ebalazweni lesimo sezulu, kufanele unake izimpawu zokucindezela. Ukuze ufunde ingcindezi engaphezulu ye-barometric, hlola isobars. Le yimigqa ekhomba inani elifanayo lengcindezi yasemkhathini yezindawo ezahlukahlukene. Lokho wukuthi, uma sibona imephu lapho imigqa ye-isobar isondelene kakhulu khona, kuzoba nesimo sezulu esibi. Lokhu kungenxa yokuthi ebangeni elifushane, amanani engcindezi ayashintsha. Ngakho-ke, kukhona ukungazinzi komkhathi.
Imigqa ye-isobar imaka ijubane nokuqondisa komoya. Umoya uqondiswa kusuka ezindaweni lapho kunengcindezi enkulu yomkhathi kuya lapho kuncane khona. Ngakho-ke, lolu lwazi singalwazi ngokuhlaziya amanani ama-isobars. Uma sibheka ama-isobars abekwe emibuthanweni emincane, isikhungo sikhombisa isikhungo sengcindezi. Kungaba kokubili ukuphakama, ngophawu A, nangaphansi, ngophawu B.
Kumele sazi ukuthi umoya awuhambi ezansi kuma-gradients okucindezela. Iyazungeza ngenxa yomphumela weCoriolis (wokujikeleza komhlaba). Ngakho-ke, ama-isobars asohlangothini lwewashi ukugeleza kwe-anticyclonic nokugeleza okuphambene ne-cyclonic. I-anticyclone ifana namazinga okushisa aphezulu nesimo sezulu esihle. Lesi siphepho ukungazinzi komkhathi okuguqulela esivunguvungwini. Lapho ama-isobar esondelana kakhulu, isivinini somoya siqina.
Ukuhunyushwa kohlelo lwengcindezi ephansi futhi ephezulu
Lapho kwenzeka isiphepho ngokuvamile sihambisana neziphepho ngokwanda kwamafu, imimoya, amazinga okushisa nemvula. Lokhu kumelelwe ebalazweni lesimo sezulu ngama-isobars asondelene kakhulu. Imicibisholo ihamba ngokuphikisana newashi enyakatho Nenkabazwe futhi eno "T" phakathi isobar.
Izimo zengcindezi ephezulu azimele imvula. Umoya uya woma futhi bamelwe ngu-H phakathi nesobar. Imicibisholo ijikeleza lapho umoya ubheke khona. Ngendlela yewashi enyakatho nenkabazwe.
Kumamephu wesimo sezulu asikhombisa kuthelevishini, izingqimba ziyabonakala zikhonjisiwe. Uma imingcele idlula endaweni, kungenzeka kakhulu ukuthi isimo sezulu sizohluka. Izintaba namanzi amakhulu kungaphambukisa indlela yakho.
Kunezinhlobo ezahlukahlukene zezingqimba futhi zimelwe ebalazweni lesimo sezulu ngezimpawu ezahlukahlukene. Eyokuqala ingaphambili elibandayo. Lapho umphambili obandayo udlula endaweni, maningi amathuba okuthi imvula izoba nesikhukhula futhi kube nomoya onamandla. Kumamephu wesimo sezulu amelwe yimigqa eluhlaza okwesibhakabhaka nonxantathu ohlangothini lwendlela yokuhamba esuka ngaphambili.
Uhlobo lwesibili ingaphambili elifudumele. MinaKusho ukwanda kwamazinga okushisa njengoba kusondela. Isibhakabhaka sihlanza ngokushesha njengoba ngaphambili kudlula. Uma umoya oshisayo ungazinzile, ezinye iziphepho zingaba khona. Zimelwe ebalazweni lesimo sezulu ezinemigqa ebomvu kanye namasentimitha ohlangothini lapho zibheke khona.
Uhlobo lokugcina luyi-front occluded. Kwakhiwa lapho ingaphambili elibandayo lifica elifudumele. Zihlotshaniswa neminye imiphumela yesimo sezulu njengeziphepho. Kungaba nokuvaleka okufudumele noma okubandayo. Lapho ingaphambili elivalekile lingena, umoya uya woma. Zimelelwa ulayini onsomi namasendilinga nonoxantathu lapho kuqondiswa umoya.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda ukuhumusha imephu yesimo sezulu. Noma yimiphi imibuzo, yishiye kumazwana abekiwe. Sizokuphendula ngenjabulo i-Respon
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Ungayifunda kanjani futhi uyiqonde imephu yesimo sezulu
Ngiyabonga kakhulu uchazwe kahle, ngixhunywe ekufundeni ukutolika kahle isikhathi.
Ngiyabonga kakhulu ngevidiyo nangemibhalo. Ngifunde okuningi futhi bengifuna izibonelo eziningi.
Ngalesi siphepho osikhulumile ukuthi sisenyakatho ne-Italy, ubheka ukuholwa ngumoya okuzodalwa yilokhu, lapho umoya uvela ezwenikazi i-Europe, kungaba umoya owomile onamathuba amancane emvula?
Konke odinga ukukwazi mayelana nentaba-mlilo yaseKilauea